Serasera sy asan-gazety :: Teboka maro no hasiam-panovàna ao anatin’ilay lalàna teo aloha • AoRaha
Serasera sy asan-gazety Teboka maro no hasiam-panovàna ao anatin’ilay lalàna teo aloha
Hisy fanovàna ny lalàna mifehy ny serasera, araka ny nivoitra nandritra ny fihaonan’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Lalatiana, tamin’ireo solontenan’ireo tompona haino aman-jery sy gazety, teny Nanisana, omaly.
« Isan’ny lasitra hoentina miroso amin’ny fanitsiana ireo fehin-kevitra tapaka tamin’ ny fivoriana fakan-kevitra notarihin’ny fandaharanasam- pampandrosoan’ny Firenena Mikambana (Pnud) sy ny tahirin-kevitra narafitry ny mpanao gazety. Tsy maintsy jerena ihany koa ilay lalàna misy ankehitriny », hoy ny minisitra.
Nambaran’itsy farany fa ilaina ny hevitry ny rehetra hahafahana manatontosa amin’ny fandrafetana an’io volavolan-dalàna mifehy ny serasera tokony hatolotra ny Antenimierampirenena io, ka harafitra ho lasa lalàna iray izany.
Lohahevitra efatra aloha no nodinihina nandritra ny fihaonana omaly: ny famaritana ny lalàna mifehy ny fanitarana an’ireo haino aman-jery manerana an’i Madagasikara; ny fametrahana fepetra vaovao amin’ny fahazoana ny karatra maha mpanao gazety matihanina; ny fanavaozana ny endrik’ ireo mpikambana tokony handrafitra ny manamahefa nasionaly misahana ny fampanarahan-dalàna ny serasera amin’ny haino aman-jery (Anrcm).
Tokony hisy ny fisoloan- toerana bebe kokoa an’ ireo sehatra tsy miankina ao anatin’ny Anrcm, raha ny hetahetan’ireo nasaina teny Nanisana. Nasian-teny ihany koa ny fikasana hanala tsikelikely tsy ho eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Serasera intsony ny Holafitry ny mpanao gazety (Ojm). Mbola hitohy ity fihaonan’ ny minisitra amin’ireo tompona haino aman-jery ity.
Antenimieram-pirenena Hijoro ho hery afovoany ny vondrona parlemantera repoblikana
Fivahinianan’ny PAPA Handray an-tanana ny lafiny fandaminana ny Antilin’i Madagasikara
Tsy misy vaovao !
Fampandrian-tany any amin’ny faritra :: Hahery vaika ny hetsiky ny vondron- tafika manokana hiady amin’ny dahalo
Fifidianana solombavambahoaka :: Hanasonia Dina alohan’ny fampielezan-kevitra ireo kandidà